12 Wadiiqo Jiilka Nuxurka Hal abuurka | Martech Zone
Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Axad, Agoosto 26, 2012 Douglas Karr
Waxaan leenahay webinar layaableh shalay la PR Gobolka Salal iyo Zoomerang, in kabadan 1,600 oo qof ayaa isdiiwaangaliyay !!! Webinar wuxuu ahaa webinar wadajir ah oo leh John O'Connell, lataliye PR iyo Isgaarsiineed oo ka socda HNTB.
Waxaan wax ka beddelay bandhiggeyga oo ah qaab saaxiibtinimo oo loogu talagalay in lagu qaybiyo halkan:
12-ka Wado ee Abuurka Mawduuca Hal-abuurka ah:
Fahmaan ujeeddo martidaada.
Jooji iibinta iyo bixin qiimo akhristayaashaada halkii.
Soo ogow waxa ay macaamiishaadu iyo rajadu doonayaan!
Quudiya dareenka: qoraal, maqal, muuqaal iyo is-dhexgal.
Ka dhig sahan iyo doorashooyin istaraatiijiyad nuxur muhiim ah.
Keen fariin isku mid ah siyaabo kala duwan adoo adeegsanaya mid kasta dhexdhexaad cusub.
Is-dhaafsi mid kasta oo ka mid ah kuwa dhexdhexaadiyeyaasha ah midba midka kale.
Bilow dabka dabka! Ku bilow isticmaalka Infographics.
Daar oo dhiirigelinta wadaagista bulshada… Kudar badhamada bulshada!
Feejignow oo ugaarsada dhagaystayaasha cusub adoo kor u qaadaya waxyaabahaaga.
Cabbiraad natiijooyinka iyo isticmaal waxa sida ugu fiican u shaqeeya.
Soo noolee content jir oo dib-u-isticmaal iyo dib-u-dhiirrigelin!
Waxay ahayd webinar fantastik ah oo dad weyni u soo baxeen. Waxay u muuqataa in nuxurka uu ku jiro qof walba maskaxdiisa maalmahan! Waxaan rajeynayaa in waxyaabihii laga soo qaatay bandhigga ay ahaayeen in si wax ku ool ah loo adeegsado doorashooyinka iyo sahannada, iyo sidoo kale in lagu dhiirrigeliyo waxyaabahaaga adoo adeegsanaya aaladaha sida PR, iyo dib u adeegsiga waxyaabaha aad ka heleyso sida dhexdhexaadiyeyaasha ay fure u tahay istiraatiijiyad weyn oo wax ku ool ah!
Emailvision Waxay Bilaabeysaa Email, Sirdoonka Bulshada iyo Macaamiisha